Ungaziva Sei Kunamata Kwechokwadi? | Mashoko Akanaka
1. Panongova nechitendero chimwe chete chechokwadi here?
“Chenjererai vaprofita venhema.”—MATEU 7:15.
Jesu akadzidzisa vateveri vake chitendero chimwe chete, chitendero chechokwadi. Chakaita somugwagwa unoenda kuupenyu husingaperi. Jesu akati: ‘Vashomanana vari kuwana’ mugwagwa iwoyo. (Mateu 7:14) Mwari anogamuchira chete kunamata kwakavakirwa muShoko rake Bhaibheri. Vanamati vose vechokwadi vakabatana mukutenda kumwe chete.—Verenga Johani 4:23, 24; 14:6; VaEfeso 4:4, 5.
2. Jesu akatii nezvevaKristu venhema?
“Vanotaura pachena kuti vanoziva Mwari, asi vanomuramba nemabasa avo.”—TITO 1:16.
Jesu akanyevera kuti vaprofita venhema vaizokanganisa chiKristu. Nechekunze, vanoita sekunge vanamati vechokwadi. Machechi avo anozviti ndeechiKristu. Asi unogona kuona kuti ivo vanhu vakaita sei chaizvo. Sei? Kunamata kwechokwadi chete ndiko kunoita kuti pave nevaKristu chaivoivo vanozivikanwa neunhu hwavo nemaitiro avo.—Verenga Mateu 7:13-23.
3. Ungaziva sei vanamati vechokwadi?
Funga nezvezviratidzo zvishanu izvi:
Vanamati vechokwadi vanoremekedza Bhaibheri seShoko raMwari. Vanoedza kwazvo kurarama maererano nezvarinotaura. Saka chitendero chechokwadi chakasiyana nechitendero chakavakirwa papfungwa dzevanhu. (Mateu 15:7-9) Vanamati vechokwadi vanoita zvavanodzidzisa vamwe kuti vaite.—Verenga Johani 17:17; 2 Timoti 3:16, 17.
Vateveri vaJesu vechokwadi vanokudza zita raMwari, rinonzi Jehovha. Jesu akakudza zita raMwari nokuita kuti rizivikanwe. Akabatsira vanhu kuziva Mwari uye akavadzidzisa kunyengeterera kuti zita raMwari ritsveneswe. (Mateu 6:9) Kwaunogara, chitendero chipi chinoita kuti zita raMwari rizivikanwe?—Verenga Johani 17:26; VaRoma 10:13, 14.
VaKristu vechokwadi vanoparidza nezveUmambo hwaMwari. Mwari akatuma Jesu kuti aparidze mashoko akanaka oUmambo. Umambo hwaMwari ndiyo chete tariro yevanhu. Jesu akaramba achitaura nezvahwo kusvikira zuva raakafa. (Ruka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Akati vateveri vake vaizoparidza nezvahwo. Kana mumwe munhu akauya kuti akuudze nezveUmambo hwaMwari, angangodaro ari wechitendero chipi?—Verenga Mateu 24:14.
Vateveri vaJesu havasi venyika ino yakaipa. Unogona kuvaziva nokusapindira kwavo mune zvematongerwo enyika kana kuti mumagakava anoitika kwavanogara. (Johani 17:16; 18:36) Uyewo, havatevedzeri maitiro nemafungiro anokuvadza enyika ino.—Verenga Jakobho 4:4.
VaKristu vechokwadi vanodanana zvikuru. Kubva muShoko raMwari, vanodzidza kuremekedza vanhu vemarudzi ose. Kunyange zvazvo zvitendero zvenhema zvave zvichiwanzotsigira zvakasimba hondo dzenyika, vanamati vechokwadi vanoramba kuita izvozvo. (Mika 4:1-3) Panzvimbo pezvo, vaKristu vechokwadi vanozvipira kushandisa nguva yavo nezvinhu zvavo kuti vabatsire uye vakurudzire vamwe.—Verenga Johani 13:34, 35; 1 Johani 4:20.
4. Unogona here kuziva chitendero chechokwadi?
Ndechipi chitendero chinotora zvose zvachinodzidzisa kubva muShoko raMwari, chinokudza zita raMwari uye chinozivisa Umambo hwaMwari setariro chete yevanhu? Iboka ripi rinoratidza rudo uye rinoramba zvehondo? Unofungei?—Verenga 1 Johani 3:10-12.